आह, स्विट्जरल्याण्ड, एक सुन्दर र शान्तिमय देशको बीचमा आरामसँग बसिरहेको छ इटाली, फ्रान्स, र जर्मनी. किन स्विट्जरल्याण्ड लगातार दुनिया मा happiest देशहरूको एक दर्जा दिइएको छ यो एक यात्रा लायक हेर्न हो. त्यसैले तपाईं के गर्दा तपाईंलाई लाग्छ कि को लाग्छ 'स्विट्जरल्याण्ड '? म अनुमान छु हिउँले ढाकिएको चुचुरो, पनीर, र चकलेट. त्यहाँ चकलेट लागि समय प्रशस्त हुनेछ र Fondue तपाईंको स्विस मा vacay, तर सांस्कृतिक सबै समावेश गर्न निश्चित, प्राकृतिक, र ऐतिहासिक विशेषताहरू यो देश प्रस्ताव छ. महाकाव्य रेल सवारी र डाँडाबाट चिबुक-गिर वास्तुकला गर्न पदयात्राहरू, स्विट्जरल्याण्ड हरेक मौसममा यात्री हरेक प्रकार प्रदान गर्न केहि छ. का लागि अवश्य विचाराधिनगर्नुपर्नेकार्य केही तल तोड गरौं आफ्नो स्विट्जरल्याण्ड यात्रा.
यो ठूलो गुफा छ एक ताल र भोज हल भित्र कि वास्तवमा बारेमा समायोजित गर्न सक्छन् 400 मान्छे र यस्तो बुफे डिनर रूपमा घटनाहरू लागि बाहिर भाडामा हुन, दलहरू, र विवाह. घटनाहरू त्यहाँ डीजे सुविधा, डान्सरहरू, र संगीतकार. तपाईं एक अद्वितीय गन्तव्यमा Vitznau देखि एक ऐतिहासिक रेल लाग्न सक्छ. आफ्नो वेबसाइट मात्र जर्मन छ, तर तपाईं Google Chrome थप यात्रा जानकारी को लागि कुनै पनि विदेशी भाषा वेबसाइट जाँच गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ - तपाईं स्वचालित अनुवाद मा गर्न सक्नुहुन्छ!
हरेक प्रमुख सहर छ एक इतिहास वा विज्ञान संग्रहालय को लागी भयानक हो शहर ब्रेक र बरसातका दिनहरू. तथापि, केही गन्तव्यहरू साँच्चै छ अद्वितीय संग्रहालयहरु बस छैन छुटेका पर्छ भनेर. मानिसहरू H.R भ्रमण गर्न दुनिया भर सबै आउन. Gruyère मा Geiger संग्रहालय.
फोन्डु छ सबै भन्दा प्रसिद्ध व्यञ्जन एक स्विट्जरल्याण्ड बाहिर आउन, र यो कुनै दुर्घटना छ. मान्छे स्विट्जरल्याण्ड को पश्चिमी फ्रान्सेली भाषा बोल्ने भाग मा वर्ष सयौं लागि एक कम्युनल पट देखि पग्लियो पनीर खाने गरिएको छ. तथापि, 1930 मा स्विस पनीर संघ आक्रामक यो पकवान दुवै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रीय marketed, यो स्विट्जरल्याण्ड को राष्ट्रिय पकवान घोषणा गर्ने देशको overabundance बेच्न तरिका रूपमा पनीर. र हामी खुसी तिनीहरूले गरे हो, जो मन छैन पग्लियो पनीर र रोटी? सुक्खा आफ्नो Fondue जोडी सेतो रक्सी, र स्नान दोहोरो छैन पक्का हुन!
यो लागि समय वास्तविक कारण तपाईं स्विजरल्याण्ड जाँदै हुनुहुन्छ – मिठाई! स्विट्जरल्याण्ड एकदम यसको चकलेट लागि प्रसिद्ध छ, र तपाईं धेरै लक्जरी chocolatiers सडक कुनामा मा देशमा जताततै पाउन सक्नुहुन्छ, तथापि, ज्यूरिख यसको धेरै चकलेट भ्रमणका लागि प्रसिद्ध छ. त्यहाँ एक चकलेट यात्रा छ प्रत्येक बजेट फिट! तपाईं शनिबार बिहान पैदल भ्रमण शहर मा सबै भन्दा राम्रो चकलेट केही शहर विशेषताहरू जोडती जो लाग्न सक्छ. तपाईं एउटा सानो चकलेट कारखाना भ्रमण प्रयास सक्छ, र अनुभव तपाईंको आफ्नै बनाउन चकलेट बार. साँच्चै शानदार गर्मी गतिविधिको लागि, एक चकलेट लिन डुङ्गाबाट भ्रमण गर्न Lindt र Sprungli कारखाना.
ठिक छ, अब तपाईं र चकलेट र पनीर अप भरिएको छ कि, यसलाई फेरि बढ प्राप्त गर्न समय छ! स्विस पहाड बस जाडो स्किइङ लागि छैन! छन् मनोरम गर्मी hikes तपाईं देश वरिपरि सबै मा जान, तर Jungfrau क्षेत्र आफ्नो बाल्टिन सूची मा उच्च अप हुनुपर्छ. को Jungfraujoch मा युरोप मा उच्चतम बिन्दु हो 3,454 मीटर (~ 11.330 खुट्टा) र दृश्य छैन छुटेका गर्नुपर्छ. तपाईं एक ठूलो पदयात्री छैनन् भने तपाईं त्यहाँ वर्ष राउन्ड हुनेछ भनी एक रेलवे छ, वा तपाईंले जाडो समयमा भ्रमण. तपाईं एउटा चुनौती अप छन् भने यी मार्गहरू केही जाँच क्षेत्र. मार्गहरू धेरै बाटो साथ राम्रो खाना र पेय प्रतिष्ठानबाट छ, त्यसैले चिन्ता छैन, तपाईं कुनै न कुनै यो आवश्यक छैन!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र केवल एउटा लिङ्क हामीलाई एक क्रेडिट दिन यो ब्लग पोस्ट गर्न, वा यहाँ क्लिक: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-experiences-switzerland-winter-summer/ - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)